नेपाली बैँकहरुद्वारा विदेशमा शाखा खोल्न दिन राष्ट्र बैँकसित माग
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालकहरूले विदेशमा नेपाली बैंकको शाखा कार्यालय खोल्न दिन माग गरेका छन् ।सञ्चालकहरूको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन) ले नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अध्ययन प्रतिवेदन...
गुरुङ सोसाइटी केन्ट यूकेले भर्चुअल माध्यमबाट मनायो तो ल्होसार
लण्डन । गुरुङ सोसाइटी केन्ट यूकेले भर्चुअल माध्यमबाट तो ल्होसार गत बिहीबार (३० डिसेम्बर २०२१) साँझ मनाएको छ । सो कार्यक्रमको अध्यक्षता समाजकी अध्यक्ष श्रीमती राजदेवी गुरुङले गरेकी थिइन्। गाई वर्ग लो-ल्होको बिदाई र...
एनआरएनएलाई निर्वाचन अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रीको आग्रह
लण्डन । परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएका छन् । संघका अध्यक्ष कुमार पन्तको नेतृत्वमा शुक्रबार गएको एक प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा मन्त्री खड्काले संघको १०औं महाधिवेशन तथा निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन...
पत्रकार महासंघ यूकेले स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम शुरु गर्दै
लन्डन । नेपाल पत्रकार महासंघ (एफएनजे) यूके शाखाको स्वास्थ्य सचेतना कार्यक्रम यही आइतबारदेखि शुरु हुने भएको छ । कोरोना महामारीको बेला बेलायतको नेपाली समुदायलाई आवश्यक स्वास्थ्य सूचना, जानकारी र परामर्श उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यक्रम...
बीसीसी युकेले धार्मिक पूजापाठसहित ल्होछार मनायो
लण्डन । बुद्धिष्ट कम्युनिटी सेन्टर (बीसीसी) युकेले धार्मिक पूजापाठका साथ ल्होछार मनाएको छ । गत बिहीबार ३० डिसेम्बर अर्थात् पौष १५ गतेका दिन नेपालीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको इंल्याण्डको अल्डरसटस्थित बीसीसी गुम्बामा दीप प्रज्ज्वलन, घ्यासी...
के विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन लेला ?
काठमाडौं । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण सङ्कटमा फसेको विश्व अर्थतन्त्रले सन् २०२२ मा पुनर्जीवन प्राप्त गर्ला ? विश्वका प्रमुख अध्ययनहरुले सन् २०२२ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि ४.९ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने देखाएका छन् । सन् २०२०...
एनआरएनए यूकेले ओमिक्रोनबारे विज्ञहरुसित अन्तरक्रिया गर्दै
लन्डन । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यूकेले कोभिड–१९ को पछिल्लो ओमिक्रोन भेरिएन्टबारे जनचेतनामूलक जानकारी दिने उद्देश्यले एक अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूको सहभागितामा ओमिक्रोनबारे अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गरिन लागेको हो...
सन्तोष साहले जिते बीबीसी मास्टरसेफ प्रोफेसनल्स रिम्याच
लण्डन । नेपाली मूलका सेफ सन्तोष साहले बीबीसी मास्टरसेफ प्रोफेसनल्सको रिम्याच जितेका छन् । सोमबार साँझ बीबीसीमा प्रसारण गरिएको फाइनलमा उनले अन्य प्रतिस्पर्धीहरुलाई पछि पार्दै सो उपाधि हात पारेका हुन् । उनले १८ किसिमका...
एनआरएनएको चुनाव पुन स्थगित
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को डिसेम्बर महिनाका लागि तोकिएको निर्वाचनको सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित भएको छ। एनआरएनए निर्वाचन समितिले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गरी गैरआवासीय नेपाली संघको निर्वाचनका लागि उपलब्ध हुनुपर्ने मतदाता सूची पूर्ण...
बिसीसी युकेले रब्जम रिन्पोछेको जन्मोत्सव मनाउँदै
लण्डन । बुद्धिष्ट कम्युनिटी सेन्टर (बीसीसी) युकेले विविध कार्यक्रमका साथ हिज होलिनेश रब्जम रिन्पोछेको जन्मोत्सव मनाउने भएको छ । वरिष्ठ बौद्ध धर्मगुरु रब्जम रिन्पोछेको आउने शनिबार २५ डिसेम्बरका दिन बीसीसी युकेको अल्डरसटस्थित गुम्बामा बौद्ध...
बिसीसी युकेले विविध कार्यक्रम गरी तमू ल्होछार मनाउँदै
लण्डन । बुद्धिष्ट कम्युनिटी सेन्टर (बिसीसी) युकेले बिसीसी युकेले विविध कार्यक्रमका साथ तमू ल्होछार मनाउने भएको छ । आउने ३० डिसेम्बर अर्थात् पौष १५ गतेका दिन बिसीसी युकेको अल्डरसटस्थित गुम्बामा धार्मिक पूजापाठका साथ तमू...
बेलायतमा एकै दिन कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघ्यो
लन्डन । बेलायतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित पाइएका छन् । यहाँका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार मात्र १ लाख ६ हजारजना भन्दा बढी सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । यसअघि यहाँ एकै दिनमा ९६ हजारजना...
« अघिल्ला 1 …34567… 525 पछिल्ला »